Apple weputara beta beta OS X 10.11.4 | Esi m mac
Apple weputara betas ohuru maka OS X 10.11.4, watchOS 2.2 na tvOS 9.2
Taa bụ ụbọchị Apple ahọrọla itinye betas ndị na-esonụ nke sistemụ arụmọrụ ya n'aka ndị mmepe. Kpọmkwem, anyị na-agwa gị ndị mmepe ngwa ahụ Ha nwere ihe ha nwere ọhụrụ beta nke ọdịnihu OS X 10.11.4, nke kwekọrọ na watchOS 2.2 na otu maka tvOS 9.2.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ha na-eme ngwa ngwa ma ugbu a, anyị niile nwere Mac na-eche mwepụta nke OS X mbipute 10.11.3, ịbụ betas nke OS X 10.11.4 nke a na-ahapụ maka ndị na-eme ngwa maka ya.
Apple ka tọhapụrụ ndị mbụ betas maka usoro nke ọ bụla: iOS, OS X, tvOS na watchOS. IPhone na iPads nwere beta 1 nke iOS 9.3 onye isi ọhụụ bụ akụkọ ọtụtụ ndị ọrụ na iPads n'ụlọ akwụkwọ Na mgbakwunye na inwe ike ijikọ ọtụtụ Apple Watch na beta 1 nke watchOS 2.2.
Maka nke ha, Macs ga - enwe ike ịhapụ beta 1 nke OS X El Capitan 10.11.4, Apple TV beta 1 nke tvOS 9.2 na ndị mmepe nke ngwa maka elekere Apple. Ha ga - enwe ike ịnwale beta 1 nke watchOS 2.2 yana iOS 9.3 dịka anyị tụrụ anya n’elu.
Ọnọdụ a na-enweta dị ka nke taa bụ ihe pụrụ iche na ọ bụ na ole na ole bụ oge ọ mere na ọtụtụ betas dị iche iche dị maka ndị mmepe. M na-agwa gị nke a n'ihi na ugbu a ndị ọrụ na-echere mmepụta nke nsụgharị nke OS X 10.11.3 na iOS 9.2.1. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na betas a bụ nsụgharị ikpeazụ ụbọchị ndị a ma ọ bụ na ọ bụghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple weputara betas ohuru maka OS X 10.11.4, watchOS 2.2 na tvOS 9.2
Gbanyụọ uzo menu nke El Capitan